YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, July 26
Shin Goun Gwep (face book) မှ...
‎(Photo: BBC Burmese)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/26/20110အကြံပြုခြင်း
44K View Downloa
Canada re-establishes diplomatic links with Burma
Economic sanctions remain as limited progress on human rights motivates renewed dialogue
Posted: Jul 25, 2011 9:53 AM ET
Foreign Affairs Minister John Baird, third from right in front row, met with Burmese Foreign Minister Wunna Maung Lwin, second from left in top row, at the ASEAN foreign ministers meeting in Bali, Indonesia, July 23, 2011. (Saul Loeb, Associated Press/Pool)
Canada has begunastrategic engagement with Burma, also known as Myanmar, that includes an exchange of ambassadors, but Ottawa has no plans to lift the economic sanctions imposed against the country anytime soon, Foreign Affairs Minister John Baird said Saturday.
Baird, speaking from Bali, Indonesia, where he attendedaregional security forum this week, said the "limited engagement" was focused exclusively on human rights.
He said he raised the issue duringameeting with the Burmese foreign minister in Bali and that he had urged the government to release thousands of political prisoners from jail.
Canada imposed economic sanctions against Burma, also known as Myanmar, in 2007 because of its complete disregard for human rights.
Myanmar held elections late last year, officially handing power toacivilian administration afterahalf-century of military rule.
Pro-democracy leader Aung San Suu Kyi was released from house arrest. But many see the changes as cosmetic and believe the army will continue to hold sway.
"I underlined the significance concern that the government of Canada and Canadians have with Aung San Suu Kyi's ability to be mobile in the country and highlighted the ongoing concerns about her safety and her security," Baird said.
The minister also held talks with his Australian and New Zealand counterparts.
The three foreign ministers reaffirmed the long-standing relations between their countries and committed to enhanced co-operation across the full range of international challenges.
"I raised the human rights situations in Burma and North Korea with my counterparts," Baird said.
"We also looked at human smuggling and illegal migration and reaffirmed that we remain committed to combatting these and other abuses of our respective immigration systems."
“ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး” ဆိုတဲ့ လက်သီးဆုပ်"
၂၆၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
မနေ့နေ့ လည်ခင်းက ရန်ကုန်မြို့ ၊ စိမ်းလဲ့ကန်သာဧည့်ရိပ်သာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အစိုးရရဲ့ 
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့တွေ့ ဆုံစကားပြောကြတယ်သူငယ်ချင်း။ သူတို့ နှစ်ယောက် လူသိ
ရှင်ကြား တွေ့ ကြတော့မယ်လို့သိရတဲ့အခါ မင်းကို ပြေးသတိရမိတယ်ကွာ။ မင်း ယောက်ဖတော်
ဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းစခန်းကနေ ပါးလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့သ၀ဏ်လွှာကိုလည်း ဧရာဝတီ
သတင်းက တစ်ဆင့် လွန်ခဲ့တဲ့ (၆)လ ကျော်လောက်တုန်းက ငါတို့ တွေ သိခွင့်ရခဲ့တာလေးကို ပြန်တွေးဖြစ်မိ
“ဆန်စင်ရာ ကျည်ပွေ့ လိုက်နေလို့မဖြစ်ဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုကို မလွဲမသွေ
လုပ်ရမယ်၊ ဒေါ်စုကို ၀န်းရံကြရမယ်” လို့မင်းပြောခဲ့တယ်လေ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေကို ရိုးသားစွာ
ချုပ်ငြိမ်းလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိကြတဲ့သူတိုင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပန်းတိုင်ကတော့ မင်းပြောတဲ့ စကားတွေပါဘဲ။
ခက်သားကလားကွာ။ တို့ နိုင်ငံအနှံ့ဗုံးတွေ ခပ်စိတ်စိတ် ပေါက်ကွဲကြတုန်းက မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့သုံးသပ်
ချက်လေးကို မင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ “တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချို့ က သူတို့ လုပ်တာလို့ဝန်ခံ
ရင်တောင် ပြည်သူတွေက ယုံမှ ယုံကြပါ့မလားတဲ့” ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲချစ်တီး။ ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ယုံကြည်မှု၊
မယုံကြည်မှုကိစ္စဆိုတာ ကျောသပ်ရင်သပ် လုပ်လို့ မရသလို၊ ဆူးခက်နဲ့ နာနာရိုက်လို့ လည်း ရတာမှ မဟုတ်
တာကွာ။ ဖြတ်သန်းမှုဘ၀တွေနဲ့ ရင်းရတယ်၊ ပြီးတော့ ထိုက်သင့်သလောက် အချိန်ယူရတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ 
ည အိပ်ခါနီးတိုင်း၊ မနက် မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်တိုင်း ထောင်ထဲရောက်နေကြတဲ့ မင်းတို့ လို နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသမားတွေကို ငါ အမြဲသတိရတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မင်းကို အိပ်မက်မက်တယ်။ အဲဒီ အိပ်မက်ဟာ
ဆူးတစ်ချောင်းဆိုရင် တို့ နိုင်ငံရဲ့ အတွင်းနက်နက်ကို ထိုးစိုက်နေတဲ့ ဆူးတစ်ချောင်းဘဲသူငယ်ချင်း။ တို့ နိုင်ငံဟာ
ဆူးပေါင်းမြောက်မြားစွာ စူးနေရှာတဲ့ ဝေဒနာသည်နိုင်ငံကြီးပါကွာ။ လက်ထိပ်ခြေထိပ်မှာ ဆူးသေးသေးလေး
စိုက်ဝင်နေရင်တောင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး နေရထိုင်ရပျက်နေသလို ခံစားရတယ်မဟုတ်လား။ မင်းတို့ လို
အရွယ်ကောင်းလူတော်တွေ မြန်မာ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ဝေးရာကို အပို့ ခံထားရလေသမျှ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ 
တရားဥပဒေဆိုတာကို ငါတို့စိတ်ဒုံးဒုံးချ မယုံနိုင်သေးဘူး။ ဘယ်လိုတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်းကိုမှ အမြင်မကြည်လင်
နိုင်သေးဘူးဆိုခဲ့ရင် ငါတို့ ကို အဆိုးမြင်ဝါဒီလို့တံဆိပ်ကပ်လည်း သေတဖန်သက်တဆုံးသာ ရှုမြင်လိုက်ကြ
ရုံပေါ့ကွာ။ မင်းတို့လွတ်မှ ဖြစ်မယ်။ အကျဉ်းထောင်နဲ့မင်းတို့ နဲ့ဘာဆိုင်လို့ လဲ။
ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့ လည်း တစ်ကျော့ပြန် နီးလာပါပြီ။ ငါတို့ အုပ်စုကို “မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ သစ္စာ
ဖောက် ပုဆိန်ရိုးများ”လို့အခု ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ထောက်လှန်းရေးတပ်မှူးဟောင်းဦးခင်ညွန့် က ပယ်ပယ်နယ်
နယ် ဝေဖန်ခဲ့တာ ဒီကနေ့ တိုင် မမေ့နိုင်သေးဘူး။ ပေါ်ဦးတို့ အုပ်စုကိုတော့ “ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ 
မြေပေါ်မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု” ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သွတ်သွင်းထားတာလည်း ဦးခင်ညွန့် ဘဲ။ မင်းတို့ ရော
ဦးခင်ညွန့် ရော အခု ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရရဲ့အကျဉ်းသားတွေအဖြစ် ဘ၀တူနေကြပေမယ့် တချိန်ကျရင် “ပုဆိန်ရိုး၊
ကွန်မြူနစ်” ကိစ္စတွေလည်း ရှင်းလင်းဖြည်ထုတ်ဖို့မဖြစ်မနေလုပ်ကြရဦးမယ်။ ဒါသည်လည်း စူးတစ်ချောင်း
ဘဲလို့ငါတို့ တွေ ယူဆထားပြီးသားပါ။
၈၈ လူထုအုံကြွမှုကြီးကို “ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့ အခွင့်အရေး တောင်းဆိုကြခြင်း” ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အခန်း
ကဏ္ဍထဲက ဖယ်ရှားမောင်းထုတ်ချင်နေကြတဲ့၊ “ပုဆိန်ရိုး ကွန်မြူနစ်” ခေါင်းစဉ်ထဲ ဆွဲသွင်းထားချင်နေကြတဲ့
လူတစ်စု အခုထိ ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ဧရာမအမှားဘဲလို့ပြောလိုက်ပါရစေ။ မပြေလည်မှုတွေ၊ စိတ်
၀မ်းကွဲမှုတွေဟာ အဲဒီက စီးဆင်းလာတာဘဲသူငယ်ချင်း။ နိဂုံးချုပ်သွားလို့ လား၊ အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့လို့ လား။
“ပုဆိန်ရိုး ကွန်မြူနစ် တွေဟေ့၊ ရှောင်ကြရှားကြ” လို့ဦးခင်ညွန့် ရိုက်နှိပ်ပေးခဲ့တဲ့တံဆိပ်တွေကို ငါတို့ 
ပြည်သူလူထုကြီးက ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြလို့ လား။ ပြောခြင်းပြောရရင် ပုဆိန်ရိုး ကွန်မြူနစ်တွေသာ ပိုတိုးတိုး
လာတယ်လို့ဆိုရမလားဘဲနော်။ ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ ဘယ်တော့မှ နွံမနစ်ဘူး။ ရာသီတွေပြောင်းပေ
မယ့် ငါတို့ သမိုင်း မနွမ်းဘူ၊ တည်စေခန့် စေရမယ်။
ဘီဘီစီသတင်းထောက်ကြီးခရစ်တိုဖာဂါးနက်ကို သတိရတယ်ကွာ။ ၆- ၈- ၁၉၈၈ ရက်နေ့ က ဘီဘီစီ
မြန်မာပိုင်းရဲ့ညဘက်ထုတ်လွှင့်ချက်ကို သတိရတယ်ကွာ။ အဲဒီနေ့ က အင်တာဗျူးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ
အားလုံးကို ဒီရက်ပိုင်းတွေ ရောက်လာရင် နင့်နင့်သီးသီး လွမ်းဆွတ်မိပါတယ်။ မင်းတစ်ယောက်ထဲသာ
ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရရဲ့အကျဉ်းစခန်းမှာ အချုပ်အနှောင်ခံထားရပြီး အများစုက နိုင်ငံခြားမှာ၊ ကျန်တဲ့ သုံးယောက်ဘဲ
ပြည်တွင်းမှာ ရှိပါတော့တယ်။ မင်းကဖြင့် အလံတွေ လွှင့်တုန်း၊ လူးလွန့် နာကျင်တုန်း၊ တကယ့် သံမဏိ
စိတ်ဓာတ်နဲ့ခရီးရှည်ထွက်နေတုန်း။
ဘယ်လိုတွေ ခံရမယ်၊ ဘာတွေ ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာ လုံးလုံးမစဉ်းစားဘဲ ငါတို့ ယုံကြည်ရာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့
နဲ့အရိုးရှင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းကို နှစ်(၂၀) ကြာလာတဲ့အချိန်မှာ ချောင်ထိုးအရောင်ဆိုးပြီး ပုံဖျက်ချင်ကြ
တဲ့ သမိုင်းဆရာဆိုး လူ့ အန္ဓတွေကိုတော့ ငါတို့ အနေနဲ့တာဝန်အရ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားဦးမှာဘဲ။
၈၈ သမိုင်းကို နေရာမှန် မရောက်သေးသရွေ့ ဆက်ပြီး တွန်းရွှေ့ သွားနေရဦးမှာဘဲ။ မြန်မာ့လူ့ ဘောင်က
ထမ်းတင်ပေးလိုက်တဲ့၈၈ မျိုးဆက်တွေရဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့ တာဝန်တွေပါဘဲ။
လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ လည်း ၈၈၈၈ သမိုင်းအပေါ် မဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့် မှုတွေကို ပြည်ဖုံးကားချသင့်ပြီလို့ 
ငါတော့ ယူဆမိတယ်သူငယ်ချင်း။ ငါတို့ နိုင်ငံရှေ့ ခရီးအတွက် ဘယ်လိုအပေါင်းလက္ခဏာမှ ထွက်မလာနိုင်တဲ့
အပြင် အညှိုးအတေးတွေသာ ဆင့်ဆင့် ပုံလာဖို့ ရှိပြီး နိုင်ငံရေးစိတ်ဝမ်းကွဲမှု အက်ကြောင်းသာ ကြီးထွားလာ
လိမ့်မယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ဘက်ကို ကြည်ကြည်ပျပျမြင်စေချင်ရင် အဦးဆုံး ကိုယ်ကလည်း သူများဘက်ကို
စိတ်ဖြောင့်အူရှင်း သဘောထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိဝန်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ ဆုံတဲ့အပေါ် မင်းအနေနဲ့ဘယ်လို
မှတ်ချက်ပေးချင်သလဲလို့မေးခွင့်ရရင် မေးချင်ပါတယ်။ မင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က ယုံကြည်ချက်
ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးရဲ့အသံကိုလည်း ကြားချင်ပါသေးတယ်။ ထို့ အတူ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ တွေ့ ၊ ဘာတွေ လုပ်လုပ်၊ ဘာစကား ပြောပြော “ထောင်ထဲက
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး” ဆိုတဲ့ လက်သီးဆုပ်ကို ဖြန့် မချ လိုက်ပါစေနဲ့ လို့ငါတော့
26 July 2011 Yeyintnge's diary.odt
26 July 2011 Yeyintnge's diary.pdf
26 July 2011 Yeyintnge's Diary
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး NLD ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်
“ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး” ဆိုတဲ့ လက...
FREE BURMA CAMPAIN ( Korea ) ၏ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား...